कहाँ पखाल्ने काठमाडौं छिर्ने गाडी?
उपत्यका भित्र प्रवेश गर्ने सवारी साधन हिलो र धुलैधुलो भए पखालेर मात्र काठमाडौं छिर्न दिने तयारी ट्राफिक प्रहरीले गरेपछि, यस्तो ब्यवस्थाका बारेमा धेरै प्रश्न र प्रतिक्रिया उठेका छन्।
काठमाडौं आफैं धुलो, हिलोले आहात भएका बेला बाहिरबाट उपत्यका छिर्ने गाडी किन धुनु पर्ने भन्ने प्रश्न उठेको छ? धुनै पर्ने हो भने कहाँ धुन पाइन्छ? कस्ले धोइदिन्छ? कति पैसा लाग्छ? यी तमाम प्रश्नको उठेपछि हामी यी प्रश्नहरु ट्राफिक प्रहरी महाशाखाका प्रमुख डिआइजी मिङमार लामालाई सोध्यौं।
लामाले यो प्रस्ताव दिर्घकालिन रणनीतिका रूपमा आएको र त्यसका लागि अब तयारी शुरू गर्ने बताए।
उपत्यका भित्र प्रवेश गर्ने सवारी साधन हिलो र धुलैधुलो भए पखालेर मात्र प्रवेश गराउने नयाँ नियम लगाउने विषयमा महाशाखाले यातायात ब्यवस्था विभाग, काठमाडौं महानगरपालिकासँग छलफल गरिसकेको छ।
यातायत व्यवस्था विभाग र काठमाडौं महानगर नयाँ व्यवस्था लगाउन सहमत भएको लामाले जाकारी दिए।
कहाँ धुने त गाडी?
वास सेन्टरले मोटरसाइकल धोएको बढीमा सय रुपैयाँ र गाडीको बढीमा ३ सय रुपैयाँ लिन सक्नेछन्।
अहिले उपत्यका भित्रिएका बस र ट्रकहरुले धेरै हिलो र धुलो भित्र्याएर काठमाडौंको प्रदुषण बढाउन बल पुर्‍याएकाले नयाँ नियम लगाइन लागेको ट्राफिक महाशाखाले जनाएको छ।
‘हामीले सडक विभाग, मेलम्ची खानेपानी आयोजना, ढल व्यवस्थापन विभाग लगायतका संस्थालाई सडकको अवस्थामा बारेमा जानकारी गराइसकेका छौं,' डिआइजी लामाले भने, ‘उनीहरुले छिट्टै सडक सुधार गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। सडकको अवस्था ठिक गरेपछि मात्र यो ब्यवस्था लागु हुन्छ।’
काठमाडौंका सडक बनिसक्ने अझ धेरै समय लाग्ने हुदाँ यो ब्यवस्था लागु गर्ने कम्तिमा एक वर्ष लाग्ने अनुमान छ।
प्रकाशित मिति: सोमबार, असार १९, २०७४, ०२:३१:११